Injalo iMacBook Air entsha kunye neMac Mini 2018 | Iindaba zeGajethi
Emva kweminyaka emininzi ngaphandle kokuhlaziywa, iApple ibonakala ngathi Wayengazilibalanga zombini iMacBook Air kunye neMac Mini, iimodeli ezimbini ezingakhange zifumane inzala kwi-Apple ixesha elide. Ukongeza, ukumiliselwa kwe-12-intshi iMacBook range, ibeke esi sixhobo njengendawo yendalo yemodeli yomoya, imodeli yokungena kuluhlu lwe-Apple MacBook.
NgeMac Mini, ikota ezintathu ezifanayo zenzekile ukusukela oko khange ayifumane ingqalelo ka-Apple ukusukela ngo-2014, ukulungiswa kokugqibela okufumene le Mac apho kufuneka sidibanise iipheripherali esizifunayo. Okokugqibela, ukulinda kugqityiwe kwaye ekugqibeleni singathetha malunga nokuvuselelwa okulindelwe ixesha elide kuzo zombini izixhobo. Apha sikubonisa iinkcukacha zeMacBook Air entsha kunye neMac Mini 2018.
1 IMac Mini 2018
1.1 Iimodeli zeMac Mini 2018 kunye namaxabiso
1.2 Mac Mini 2018 Unxibelelwano
1.3 Mac Mini 2018 umhla wokufumaneka
2.1 Iimodeli zeMacBook Air 2018 kunye namaxabiso
2.2 Mac Book Air 2018 uqhagamshelo
2.3 Ukufumaneka kweMacBook Air 2018 kunye nemibala
IMac Mini 2018
Uluhlu lweMac Mini belusoloko kuphela kwendlela iApple ebeka ngayo kuthi kwabo basebenzisi abafuna izixhobo ezinamandla kodwa befuna Sebenzisa esakho esweni, ikhibhodi kunye nempuku, ngaphandle kokuya kuluhlu lweMac. Iimodeli zokuqala ezafika kwintengiso zisivumele ukuba siguqule ezinye zezinto zangaphakathi, kodwa ngohlaziyo lokugqibela, ngo-2014, zonke izinto zaqala ukuba welding, kuthintelwe ukuba kungahlaziywa njengangaphambili, ukubethwa okunzima kuthi kuthi ebesoloko ukhetha le modeli.
Enye yeenoveli eziphambili zesizukulwana esitsha seMac Mini ifumaneka kumbala wesixhobo, esithi uhambile engwevu yesiko waya endaweni engwevu, Umbala apho iMac Pro ikwafumaneka, umbala obambe ingqalelo enkulu kubasebenzisi beApple, abasebenzisi abanokuba sele bekhathele ngumbala wesilivere wemveli weemveliso zabo.
Iimodeli zeMac Mini 2018 kunye namaxabiso
I-Apple isinika iimodeli ezimbini ezisisiseko.
IMac Mini, inikwe amandla yiprosesa yesibhozo ye-Intel Core i3 processor ene-quad-core 3,6 GHZ kunye ne-128 GB yokugcina i-SSD kunye ne-8 GB ye-DDR4 RAM, enexabiso kwi 899 euro.
Singayenza ngokwezifiso le modeli kwaye endaweni yokusebenzisa i-Intel Core i3 sinokukhetha i-Intel Core i7 engundoqo ezintandathu (i-euro ezingama-350 ezongezelelweyo). Singayandisa imemori ye-RAM ukuya kuthi ga kwi-64 GB (i-1.689 eyure eyongezelelweyo) kunye nokugcinwa kwe-SSD ukuya kuthi ga kwi-2 TB (i-1.920 eyure eyongezelelweyo).
IMac Mini, inikwe amandla yi-5 GHz 3-core 256th-generation Intel Core i8 processor, ene-4GB yokugcina i-SSD kunye ne-XNUMXGB ye-DDRXNUMX RAM. Ukuqala nge-1.249 euro.
Xa kufikwa ekwenzeni ngokwezifiso le modeli, iApple isinika ithuba lokusebenzisa I-7th yeGen Intel Core iXNUMX (I-euro ezingama-240 ezongezelelweyo). Ikwasivumela ukuba sandise ukuya kuthi ga kwi-16, 32 okanye i-64 GB, njengoko kwenza indawo yokugcina ye-SSD: 512 GB, 1 TB okanye 2 TB yokugcina.
Mac Mini 2018 Unxibelelwano
Isizukulwana esitsha seMac Mini sisinika ukuya kuthi ga I-4 Thunderbolt 3 (USB-C) amazibuko, kunye nokudityaniswa okubini kwe-USB-3 kunye nokukhutshwa kwe-HDMI 2.0. Okumangalisa kukuba, i-headphone port isekho kwesi sizukulwana sitsha.
Iindudumo (ukuya kuthi ga kwi-40 Gb / s)
I-USB 3.1 iGen 2 (ukuya kuthi ga kwi-10Gb / s)
I-Thunderbolt 2, HDMI, DVI, kunye neVGA (ifuna iiadaptha, ezithengiswa zodwa)
Izibuko ezimbini ze-USB 3 (ukuya kuthi ga kwi-5 Gb / s)
Uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi 2.0 izibuko
Izibuko leGigabit Ethernet (ukhetho lokumisela kunye ne-10 Gb Ethernet)
Intloko ye-3,5mm yentloko
Mac Mini 2018 umhla wokufumaneka
Njengazo zonke iimveliso ezivezwe ngu-Apple kumxholo wokugqibela, ukuba ubunobunzima ekuvuseleleni iMac yakho yakudala, yeMac Mini, ngoku ungayenza ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi ye-Apple, Kodwa kuya kufuneka ulinde de kube ngu-7 kuNovemba olandelayo, umhla apho abasebenzisi bokuqala abagcinayo baya kuqala ukuwafumana.
Olunye ukhetho kukukulinda de kube nguNovemba 7 ozayo kwaye yiya kwiVenkile yeApple ukuthenga ngokuthe ngqo imodeli efanelekileyo ngokufanelekileyo uhlahlo lwabiwo-mali kunye neemfuno zakho.
Amaxesha ngaphambi kokunikezelwa kwesizukulwana esitsha seMacBook Air, uApple ukhumbule indlela uSteve Jobs azise ngayo esi sixhobo ukuyikhupha kwimvulophu yesayizi yefolio kwaye babashiya bethe nqa bonke ababekho kuloo ngcaciso. Kuyavunywa, iApple yenze umsebenzi wokwenyani wobunjineli ukunciphisa ubungakanani bekhompyuter kwintetho engaphezulu kweminyaka eli-10 eyadlulayo. Ngoku kungaphezulu kwesiqhelo ukufumana iilaptops ezilingana ngokugqibeleleyo ngaphakathi kwimvulophu, ukuba, ixabiso layo lisephezulu kakhulu.
Isizukulwana esitsha seMacBook Air, sisinika njengeyona nto intsha, ukuba asithathi ngoyilo kuyilo, Ukubonisa iretina, Olunye lwezona zikhetho zifunwayo ngabasebenzisi ekudala befuna ukuhlaziywa kolu luhlu. Isikrini se-retina esikwi-13-intshi sisinika imibala engama-3% ngaphezulu kunesizukulwana sangaphambili enkosi kwiipixels ezi-48 ezigidi. Ubungakanani besixhobo buncitshisiwe kakhulu kwaye businika amandla afana nalawo sinokufumana kwiMacBook Pro, ukugcina imigama.
Enye into entsha evela kwisandla seMacBook Air, yile ukudibanisa i-ID yokuChukumisa, ID yokuChukumisa eya kuba noxanduva lokukhusela ukufikelela kwizixhobo zethu ngalo lonke ixesha. Ukongeza, inoxanduva, ngokuxhomekeke kwiminwe esetyenzisiweyo, ukuvula iseshoni yabo bobabini abasebenzisi apho inxulunyaniswa khona. Ukomeleza ukhuseleko lweMacBook Air, iApple isebenzise isizukulwana sesibini seT2 chip esisebenza ngokubambisana neTouch ID.
I-trackpad ikwandisile ngobukhulu, ngoku ikhulu nge-20% kwaye iyahambelana ne-Force Touch. Ikhibhodi iye yahlaziywa ngokupheleleyo ukusebenzisa uyilo lwebhabhathane, ephindaphindeka kane uzinzo lwamaqhosha xa kuthelekiswa nendlela yesikere sendabuko esasisetyenziswa sisizukulwana esidlulileyo. Ngokucacileyo, amaqhosha asinika ukukhanya kwakhona ukuze sikwazi ukubhala xa ukukhanya okukufutshane kunqabile.
IMacBook Air 2018 inobunzima be-1,25 kg, yiyo Inikwe amandla sisizukulwana se-5th Intel Core iXNUMX, isivumela ukuba sandise imemori ukuya kuthi ga kwi-16 GB kwaye indawo yokugcina ye-SSD inokufikelela kwi-1,5 TB. Njengoko bekulindelwe, ngaphakathi sifumana itekhnoloji yamva nje kwiinethiwekhi ngaphandle kwamacingo e-Wi-Fi, kodwa hayi ngokwenguqulo yeBluetooth, eseyinombolo engu-4.2 endaweni yenombolo yesi-5, itekhnoloji esele ijikeleze ngaphezu konyaka kwintengiso.
Ukuzimela kuyaqhubeka ukuba yindawo eqinileyo yale modeli, ifikelelweyo, ngokwe-Apple, i Ubude beeyure ezili-12, ukuba nje asiyisebenzisi ukwenza ividiyo okanye iifoto. Ngokunxibelelana, enkosi kumazibuko amabini e-Thuderbolt 3 (i-USB-C) sinokunxibelelana ngokudibanisa enye, ukubeka esweni, iiyunithi zokugcina, ezinye izixhobo kunye nokukwazi ukuyihlawulisa.
Iimodeli zeMacBook Air 2018 kunye namaxabiso
NjengakwiMac Mini, iApple isinika iimodeli ezimbini, iimodeli esinokuthi sizilungiselele ukwandisa, amandla abo kunye nokusebenza.
IMacBook Air ene-Intel Core i5, 8GB ye-RAM kunye ne-128GB yokugcina: ukusuka kwi-1.349 euro.
IMacBook Air ene-Intel Core i5, 8GB ye-RAM kunye ne-256GB yokugcina: ukusuka kwi-1.599 euro.
Zombini iimodeli ziyasivumela yandisa i-RAM kude kufike kwi-16 GB (i-240 euros eyongezelelweyo), ukongeza kwindawo yokugcina, enikezela ngeenguqulelo ze-256 GB (+ 250 euros), 512 GB (+ 500 euros) kunye ne-1,5 TB (+1.500 euro).
Mac Book Air 2018 uqhagamshelo
Ukulandela i-Apple yemveli kule minyaka idlulileyo, le modeli intsha Isinika kuphela uhlobo ezimbini loqhagamshelo lwe-Thuderbolt 3 (i-USB-C). Kwicala lasekunene lesixhobo, sifumana i-headphone jack. Olu kuphela konxibelelwano olwanikezelwa sisizukulwana esitsha seMacBook Air 2018.
Ukufumaneka kweMacBook Air 2018 kunye nemibala
UApple usinika isizukulwana esitsha seMacBook Air 2018 ngemibala emithathu: igolide, isilivere (njengesiqhelo) kunye nendawo engwevu, zonke ngaphandle kokunyuka kwamaxabiso. Ukusukela namhlanje singasigcina isizukulwane esitsha, kodwa asizukukwazi ukusonwabela kude kube ngu-Novemba olandelayo we-7, umhla apho i-Apple iya kuqala ukwenza ukuthunyelwa kokuqala kubasebenzisi abagcinileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Injalo iMacBook Air entsha kunye neMac Mini 2018
IAmazon yazisa uluhlu olupheleleyo lwezithethi ze-Echo ezine-Alexa